Bad sy ny Jica : 300 tapitrisa dolara hanohanana ny tsy miankina | NewsMada
Bad sy ny Jica : 300 tapitrisa dolara hanohanana ny tsy miankina
Vita sonia, ny 17 jona teo tany Abidjan Côte d’Ivoire ny fifanarahana eo amin’ny Banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana (Bad) sy ny Antokon-draharaha japoney ho an’ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena (Jica). Fampindramam-bola mitentina 34,41 miliara yens (300 tapitrisa dolara) ho an’ny Jica, hoentina hampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Tafiditra ao anatin’ny fandaharanasa fanohanana ny sehatra tsy miankina (Epsa) aty Afrika ity fifanarahana ity.
Fandaharanasan’ny Jica tohanan’ny banky Bad, andiany fahafito aty Afrika, ity vita sonia ity. Ampiasaina mandritra ny telo taona ity famatsiam-bola ity. Tataovana 0,35 % ny zanabola, aloa ao anatin’ny 40 taona, miampy fandeferana hanalavam-potoana 10 taona. Tanjona ny hanomezana aina ny fitomboana ara-toekarena sy hampihenana ny fahantrana aty Afrika, aminan’ny alalan’ny fanohanana ny mpandraharaha tsy miankina.
Efa hatramin’ny taona 2007
Nanomboka ny taona 2007, nahatratra 1,5 miliara dolara ny fampindramam-bolan’ny Bad ny Jica ao anatin’ny fandaharanasa Epsa. Nitentina 100 tapitrisa dolara io famatsiam-bola voalohany io.
Nitsotra ny filoha lefitry ny Bad, Rtoa Hassatou N’Sele, fa mpiara-miombon’antoka manan-danja amin’ity banky ity ny Jica amin’ny fampandrosoana an’i Afrika. Hatramin’ny nisian’ny fandaharanasa Epsa, nampitombo ny vola kirakirain’ny Bad ny fanohanan’ny Jica ny mpandraharaha tsy miankina, amin’ny fananganana fotodrafitrasa tsara kalitao sady mampihena ny fahantrana.
Nilaza ny tale jenerali (DG)-n’ny Jica, sampana Afrika, Ryuichi Kato, fa tafiditra ao anatin’ireo laharam-pahamehan’ny Bad, miisa dimy ny Epsa ny fandaharanasa Epsa, fanohanana ny sehatra tsy miankina.